Semalt - Ezinye izinto ezixhasayo kwi-Internal Activity kwi-Google Analytics
Umsebenzi wangaphakathi yinkcazo ye-1 engemva kolwazi lwesiseko kwiGoogle Analytics. Ngaba akufanele kuthiwa into ethile malunga nogaxekile? Ngokwenene ucaphukisa, ugaxekile unokubonakala ngokugqithiseleyo, ngelixa umsebenzi wangaphakathi unzima ukubona ukutyelela okwenene.
U-Andrew Dyhan, uMphathi weNtengo kaMthengi we-10 (Semalt , ucacisa apha kwiingcebiso ezinokukunceda ukulawula umsebenzi wangaphakathi - top 10 computer experts.
Yintoni umsebenzi wangaphakathi?
Umsebenzi wangaphakathi uvelisa ulwazi olwenziwe nguwe okanye umntu ovela kwiqela elikhupha kwiziko okanye kwindawo yesakhiwo. Ezi ngongoma zibhaliswe kwi-Google Analytics ngokungathi zivela kwisivakalisi sangempela.
Oku kungakhokelela kwingozi eninzi, ingakumbi kuba kamva kunzima ukuhlula ukuba kutyelelo olwenyani kwaye luvela kubantu abathile basuka kwindawo leyo.
Yiyiphi idilesi ye-IP?
Idilesi ye-IP iyinombolo engaqhelekanga eyahlula iinkqubo, ii-PC kunye nezixhobo ezihlukeneyo..Iips zihlela kwiintlobo ezi-2: loluntu olukwahlula kuwebhu yonke kunye neyodwa. Umxhasi kumthengisi wokufikelela kwinethiwekhi (ISP), omnye unokuba ne-IP Static kunye ne-Dynamic IP. Ngaphantsi kwakho uza kufumana izikhokelo zokunqanda i-IP static.
Ukuthintela umsebenzi wangaphakathi kunye ne-IP static kwi-GA
Unyanzelekile ukuba utshintshe iinkqubo ezingabi zixhobo: ukuba ushintshela idilesi ye-IP ehambelana nenkqubo, zonke iigadgets ezichaphazelekayo nazo zihanjiswa.
Xa usebenzisa i-fowuni ukuvavanya i-interface yakho ye-Wi-Fi: xa usebenzisa i-web yakho yolwazi oluphathekayo, umthengi wakho ukhetha enye i-IP nganye umzuzu. I-Wi-Fi ikhethwa kakhulu xa uvavanya nayiphi na isayithi usebenzisa ifowuni kuba inamandla okushiya umsebenzi wakho usebenzisa ubuchule ngaphantsi.
Indlela yokwenza isitishi somsebenzi wangaphakathi
Unokwenqaba i-IP enye okanye uluhlu lwe-IP kwisiganeko esifanayo. Oku kuphuculwa ibha yomgca emva kwe-IP nganye efana nale.
Indlela yokugwema i-IPs kwi-Google Analytics
Ngethuba elihle lokuba unombutho ongezantsi, kungenzeka ukuba ubhekane ne-IPs elandelayo. Ukuyeka ukungena kwi-IP nganye, unokwenza ishaneli nge-regex eqhutywe phambili.
Kopisha umxholo owenziwe kwi-Channel Example Example
Ukuvavanya ishaneli, khangela iindawo ezingavunyelwe kwisayithi kwaye ucacise ukuba lo msebenzi, ungabonakali kwingxelo eqhubekayo, uneza umlingisi kwisigqibo.